Ọgwụ ọdịnala ndị China, Mwepụta ahịhịa, Mkpụrụ osisi na Ifuru Tea - HEX
HEBEI HEX IMP. & EXP. COMPANY bụ ụlọ ọrụ lekwasịrị anya na mbupụ ahịhịa ahịhịa, ahịhịa izizi emere, ihe ọkụkụ, tii ifuru, tii ahịhịa, ihe anụmanụ, ihe mgbakwunye ahụike sitere n'okike. A na-eji ọgwụgwọ ọdịnala ọdịnala eme ihe dị ka nlekọta ahụike kachasị n'akụkụ ụwa niile ruo ọtụtụ narị afọ. Nkpuru ahihia ndia sitere na osisi, okooko osisi na osisi achoputara n'ime ohia ma ha emeela ihe maka otutu ogwu ha ruo otutu afo.
Plọ ọrụ na-eji nnọọ nlezianya ahọpụta ahịhịa na ihe ọkụkụ. nwekwara ụlọ ọrụ na-enweghị mmetọ na-enweghị mmetọ na nhazi nke ọgwụgwọ ọgwụ ndị China (TCM) .HEX na-ahọrọ ndị nrụpụta nke ọma ma na-enyocha usoro njikwa njikwa maka ngwaahịa anyị.
Gan Mao Ling (Mbadamba mbadamba ihe nkiri)
Na-akwado ahụike nke sistem okuku ume, sistemu nchekwa, sistem ụjọ, sinuses, afọ na afọ na izugbe nke ahụ.
Na-akwado ahụike nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na usoro eriri afọ.Helps iji belata nju afọ. Akụrụngwa Patchouli, Perilla epupụta, Angelica dahurica, Atractylodes macrocephala (nke e ghere eghe), bee peanger, Pinellia (mere), Magnolia (nke ejiri ginger), Poria, Platycodon, licorice, ite afọ, jujube, ginger. Ngwa: Ọ dịghị àgwà ọ bụla Ngwaahịa a bụ ọgwụ gbara ọchịchịrị na-acha aja aja; keisi, ụtọ na ubé ilu. Nlekọta 1. Nri kwesịrị ịbụ ìhè. 2. Ọ bụghị advisab ...
Omenala Chinese patent ọgwụ bụ mkpụrụ ọgwụ, ntụ ntụ, Capsule preparations, onu mmiri mmiri na omenala Chinese ọgwụ na ọgwụ mere si Chinese herbal iberibe. Enwere ike iji ha gwọọ ọrịa, gbochie ọrịa ma kwalite ahụike.
Mkpụrụ kranberị extract Nchịcha kranberị nwere flavonoids eke na Procyanidins, nke nwere ike weghachite ike nke Collagen, mee ka anụ ahụ dị nro ma na-agbanwe, bụ ihe mkpuchi anwụ, nwere ike igbochi UV mmebi ahụ, ezigbo ọrụ antioxidant, mgbochi ịka nká, iji chebe ọrịa obi, kamakwa mgbochi dị mma yana ọgwụgwọ adjuvant nke ọrịa urinary tract nke nwanyị
Diosgenin wepụ: A na-akpọ ya "ọlaedo ọgwụ" n'ọhịa ahụike. Diosgenin bụ ihe dị mkpa dị mkpa maka mmepụta nke steroid steroid. Steroid homonụ nwere ọgwụ mgbochi siri ike, ọrịa nfụkasị, mgbochi nje na ọgwụ mgbochi ọgwụ, bụ ọgwụgwọ nke ọrịa ogbu na nkwonkwo, ọrịa obi, ọrịa leukemia lymphoblastic, cellular encephalitis, ọrịa akpụkpọ, mgbochi akpụ yana ndị ọrịa dị oke mkpa maka iji ihe dị mkpa. ọgwụ ọjọọ; Ọ bụ akụrụngwa nke afọ ime Ketenolo ...
Stevioside (CNS: 19.008; INS: 960), nke a makwaara dị ka Stevioside, bụ glycoside e wepụtara na epupụta nke Stevia Rebaudia (Stevia), ezinụlọ nke osisi na ezinụlọ ndị mejupụtara. Stevia sugar calorific uru bụ naanị 1/300 nke sucrose, ọ naghị etinye obi gị dum mgbe ị rụsịrị ahụ nke mmadụ, ọ naghị ewepụta okpomọkụ, ọ dị mma maka ndị ọrịa mamịrị na oke ọrịa na-atọ ụtọ. Mgbe agwakọtara Stevia na sucrose fructose ma ọ bụ shuga isomerized, uto ya na uto ya ga-akawanye mma. Enwere ike iji ya maka swiiti, achịcha, ihe ọ drinksụ drinksụ, s ...
Nrụpụta ọrụ nke Rose wepụ
Nrụpụta ọrụ na ebumnuche naturedị nwayọ, nwere ike belata mmetụta uche, dozie endocrine, zụọ ọbara, chọọ nlekọta anụ ahụ, mezie imeju na afọ, belata ike ọgwụgwụ, melite ahụ ike, tii nwere ọmarịcha ma mara mma, nke nwere ike belata mmetụta uche ma belata enyemaka ịda mbà, ọ nwere ike melite e ...
Na-ewere usoro were otu ngaji oge ọ bụla, ihe dịka gram 1 ruo 1.5, were ya na mmiri ọkụ, ọkara elekere mgbe nri ụtụtụ na nri abalị, ọbụnakwa ọkara otu ọnwa. Usoro onunu ogwu ubochi kacha mma kwa ụbọchị bụ gram 2 ruo 3, otu ụtụtụ na otu anyasị. Inweta oge Dika ụkpụrụ nke ...
Kpụrụ Maka ahịhịa nke ahịhịa ndị China
A na-ebupụkarị ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọgwụ ndị ọdịnala ndị China na-ebupụ. Nke a nwere ike ịbụ eziokwu na ọtụtụ echiche dị iche iche banyere ọgwụ ndị China na-ewepụta na ọgwụ ndị China mepụtara. Ọtụtụ ndị na-eche na ọgwụ ndị China na-ewepụta dị iche na tr ...
Mkpụrụ osisi Tea arụmọrụ
Spleen na Stomach German ifuru nectar nwere nnukwu vitamin C, na mkpụrụ osisi na okooko osisi dị iche iche nwere àgwà ha. N'ime ha, mkpụrụ vaịn na-atọ ụtọ na uto, dao dị jụụ na okike, na-edozi umeji na akụrụ, na-azụ qi na ọbara, na-akwalite mmiri ahụ, na-akwalite ...
Ọgwụ Ngwá Ọrụ Nhazi
Net Net Wepu ahịhịa, ájá na akụkụ ndị na-abụghị ọgwụ. Dika ihe di iche iche di iche iche choro, ufodu kwesiri ka ha kpochapu akpukpo aru, dika nkpuru peony ọcha; ụfọdụ kwesịrị igbupụ ogbugbo ndị na-adịghị ike, dị ka okwuchi; ụfọdụ chọrọ iwepụ isi ahịhịa amị, mgbọrọgwụ fibrous na mmapụta alaka wee pụọ ...